Wararka - Bandhigga 8-aad ee warshadaha caalamiga ah ee Shanghai iyo bandhigyada aaladaha ee ChiLink IOT ee sanadka 2019 ayaa dhammaanaya
Dhaqdhaqaaqa shirkadda > Bandhigga 8-aad ee warshadaha caalamiga ah ee Shanghai iyo robotics-ka ee ChiLink IOT ee 2019 ayaa dhammaanaya
Waqtiga: Meey 6-8, 2019
Goobta: Hoolka bandhigga adduunka ee Shanghai b018
Seddex maalmood 8th Shanghai otomaatiga warshadaha caalamiga ah iyo robotics carwada ee 2019 waxaa si guul leh lagu soo gabagabeeyay hoolka bandhigga adduunka ee Shanghai May 8, oo isu keenaya alaab-qeybiyeyaasha tayada warshadaha waaweyn.
Shenzhen ChiLink IOT, oo ah shirkad IOT ah oo loogu talagalay inay bixiso alaabada isgaarsiinta shabakadaha wirelesska iyo xalalka, ayaa lagu casuumay inay kaqeyb galaan bandhigan. Iyada oo la adeegsanayo alaabooyin is-horumarsan, ChiLink IOT waxay siisaa wax soo saarka isgaarsiinta shabakadda wireless-ka warshadaha iyo xalka loogu talagalay isticmaaleyaasha cusub iyo kuwii hore.
Intii lagu gudajiray bandhigga, tiro badan oo macaamiil cusub iyo duug ah ayaa u yimid inay soo booqdaan oo ay wax ka bartaan madasha
Bandhiggii saddexda maalmood socday ayaa si dhammaystiran u dhammaaday. Qalabka bandhiga ayaa si aad ah ugu riyaaqeen macaamiil badan. ChiLink IOT wuxuu sii wadi doonaa inuu horumariyo faa iidadiisa isgaarsiinta shabakada siligga ah wuxuuna sii wadi doonaa inuu macaamiisha siiyo alaabada taxanaha ah ee M2M iyo xalalka ku saleysan isgaarsiinta mobilada.
4G router wireless warshad
Waxay ka kooban tahay dhinacyo badan sida awoodda caqliga leh, gaadiidka caqliga badan, xakamaynta dabka caqliga leh, guriga caqliga badan, ilaalinta caqliga biyaha, daaweynta caafimaad ee caqliga leh, golaha wasiirada oo culeys la saarayo, oo ay ku soo ridayaan tuulmo, is-adeeg is-adeeg ah, amniga guud, isgaarsiinta amniga, la socodka warshadaha, ilaalinta deegaanka, kormeerka deegaanka, iftiiminta waddooyinka, ubax beerista, WiFi gaari, iwm.
Dhaqanka shirkadaha: ChiLink IOT waxaa aaminay oo aqoonsaday macaamiisha kooxdooda xirfadeed, alaab tayo sare leh iyo adeeg dhameystiran.
ChiLink IOT qiimeeyayaasha: iskaashi xirfadeed, sharaf, hal-abuurnimo, qanacsanaanta macaamiisha. www.szchilink.com
I Design Naqshadeynta Warshadaha
1. Waxqabadka sare ee processor 32-bit processor
Waxay qaadataa xalka ugu sarreeya adduunka ee wireless, Qualcomm chip, oo leh xawaare dhaqso ah, adeegsi hooseeya, qiime hooseeya, iswaafajin adag iyo xasilooni dheeri ah, waxayna buuxin kartaa shuruudaha 365 maalmood sanadkii, 7 * 24 saacadood, xasilooni muddo dheer ah hawlgalka iyada oo aan xarigga laga tuurin.
2. Qaado moduleka isgaarsiinta warshadaha waxqabadka sare
Waxay qaadataa moduleka isgaarsiinta oo tayo sare leh Huawei iyo noocyada kale ee safka koowaad, oo leh awood qaabilaad xoog leh, signalo xasiloon iyo gudbin dhaqso ah.
Openwrt waa nidaam nidaamsan oo qaabaysan oo Linux ah, kaas oo ka dhigaya aaladda mid xasiloon. Waxay leedahay Flash 128MB iyo 1G xasuusta, oo taageeri kara baahiyaha shakhsi ahaaneed ee horumarinta.
Guddiga circuit PCB tayo sare leh, iyadoo la isticmaalayo qaybaha warshadaha.
Guddiga wareegga ee shirkaddu wuxuu qaataa qalab tayo sare leh, wax soo saar heer sare ah, tikniyoolajiyad 4-lakab ah, iyo qaybaha ay ka kooban tahay badeecaddu waa qaybo warshadeed oo leh waxqabad deggan. Dhammaan mashiinnada ayaa otomaatig u ah si loo xaqiijiyo wax soo saarka qashinka, kaas oo hubiya xasilloonida iyo kalsoonida sheyga.
Awoodda korantadu waxay qaadataa naqshad ballaadhan.
Taageer dc5v-36v, ku-dhisme awood-difaac wajiga ka-hortagga iyo koronto-dhaafka iyo ka-ilaalinta hadda jirta, u adkeysata saameynta danab ku-meel-gaadhka ah iyo kan aadka u sarreeya.
Ethernet wuxuu korsadaa dekedda shabakadda gigabit oo leh difaac elektromagnetic ah.
Ethernet interface oo lagu dhisay 1.5kV ilaalinta go'doominta elektromagnetic, dekedda shabakadda Gigabit, xawaaraha gudbinta degdegga ah.
Awood xoog leh oo ka hortag ah.
Qolofku wuxuu qaataa qolof bir ah oo qaro weyn si uu u difaaco faragelinta elektromagnetic. Heerka ilaalinta qalabka waa ip34, oo ku habboon in loo isticmaalo jawiga adag ee warshadaha.
II, Shaqada awoodda badan
1. Moodh kaar badan, isku dheelitirnaan xamuul ah
Kordhi balaadhinta qalabka shabakada iyo serverka, kordhinta wax soosaarka, xoojinta awooda ka shaqeynta xogta shabakada, hagaajinta dabacsanaanta iyo helitaanka shabakada.
Taageer nidaamka shabakadaha caalamiga ah
Taageer nidaamyada isku xidhka 2G, 3G iyo 4G ee saddexda shirkadood ee waaweyn ee guryaha ka shaqeeya, ama taageer Yurub, ama taageer Koonfur-bari Aasiya, ama taageer Afrika, ama taageer nidaamka 2G, 3G iyo 4G ee Latin America iyo dalal kale.
Taageero fiilooyin iyo fiilooyin wireless ah
Dekedda WAN iyo dekedda LAN ayaa si dabacsan loo beddeli karaa, taageeridda dekedda WAN ee fiilooyinka leh iyo kaydinta wireless, mudnaanta fiilooyinka iyo kaydinta wireless.
gudbinta taxanaha ah
Taageer gudbinta taxanaha ah ee 232/485 isla waqtigaas.
Taageer kaarka shabakadda gaarka ah ee APN / VPDN, taageer noocyo kala duwan oo VPN ah
Taageer isticmaalka APN / VPDN kaarka shabakada khaaska ah, iyo taageerida PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, GRE iyo VPNs kale.
Hawlaha WiFi ee xoogga leh
Hawlaha WiFi, waxay qarin kartaa SSID, waxay taageertaa 3-way WiFi isla waqtigaas, waxay taageertaa illaa 15 kanaal, waxayna heli kartaa 50 aaladood isla waqtigaas. WiFi waxay taageertaa 802.11b / g / n, waxay taageertaa WiFi AP, macmiilka AP, ku celceliyaha, buundada gudbinta, WDS iyo qaababka kale ee shaqada, waxayna taageertaa 802.11ac, oo ah 5.8G (ikhtiyaar).
Taageer gelinta IP
Way garan kartaa in IP-ga martida loo yahay uu yahay cinwaanka IP-ga ee uu helay router-ka, kaas oo u dhigma martigeliyaha oo si toos ah u gelinaya kaarka si uu u garaaco internetka si uu u helo saldhigga IP-ga.
Taageer VLAN xijaab LAN dalwaddii
Teknolojiyada VLAN waxay isku dari kartaa meelo kala duwan, shabakado kala duwan iyo isticmaaleyaal kala duwan si ay u sameeyaan jawi shabakad dalwaddii ah.
Taageer QoS, xadka xawaaraha
Taageer xadka xawaaraha xawaaraha xadka xawaaraha ee kaladuwan ee shabakada, xadka xawaaraha IP, wadarta xadka xawaaraha xadka xawaaraha.
Taageer DHCP, DDNS, firewall, NAT, DMZ host iyo shaqooyin kale
Taageer ICMP, TCP, UDP, Telnet, FTP, HTTP, HTTPS iyo borotokoollada kale ee shabakadda
Dib u bilowga waqtiga, SMS xakameynta khadka tooska ah iyo khad la'aanta
Taageero ikhtiyaari ah oo loogu talagalay xayeysiinta xayeysiinta, Aqoonsiga SMS, xaqiijinta wechat, GPS / Beidou Meeleynta Shaqada (ikhtiyaar)
Taageer maaraynta dariiqa M2M dariiqa, kormeerka taleefanka gacanta iyo kormeerka webka
Kormeerka xogta aaladda, shaqada xadka taraafikada, riixida kheyraadka, warbixinta tirakoobka, maareynta qalabka fog (dib u bilaabista fog, furaha WiFi), wax ka beddelka cabbirka fog, xadka taraafikada, meeleynta GPS iyo raadraaca raadraaca.
III 、 Deggan oo lagu kalsoonaan karo
1. Taageer qalabka WDT ee qalabka waxsoosaarka oo waxaad siisaa hawo ka hortag dhibco ah si loo hubiyo in xogta xogta marwalba ay tahay internetka.
2. Taageerida baaritaanka ICMP, ogaanshaha taraafikada, waqtiga saxda ah ee cilladaha shabakadda, qalabka dib-u-dhiska otomaatiga ah, hubinta xasilloonida muddada-dheer iyo kalsoonida nidaamka.
3. Naqshadeynta warshadaha, qolofka birta, faragelinta ka hortagga, shucaaca ka hortagga, 95% qoyaanka, uumiga ma jiro, heerkulka sare iyo iska caabbinta heerkulka oo hooseeya, waxay caadi ahaan u shaqeyn kartaa laga jaray 30 ℃ illaa heerkul sare 75 ℃.
4. Alaabtu waxay dhaaftay shahaadada CCC, shahaadada CE ee Yurub iyo shahaado kale
Hawlgalku waa mid fudud, habboon oo fudud in la isticmaalo http://www.eastsoo.com/
1. Helitaanka fudud ee internetka, nooca riix interface kaarka isticmaalaha, geli kaarka taleefanka gacanta / Internetka waxyaabaha kaarka / kaarka shabakada gaarka ah, ka dib marka aad koranto, waxaad isticmaali kartaa dekedda shabakadda iyo WiFi.
2. Taageer barnaamijka softiweeriga ah iyo qalabka kombiyuutarka si loo soo celiyo goobaha warshadda, softiweerku wuu tirtiri karaa xuduudaha, qalabka RST-na wuu soo celin karaa dejimaha warshaddii
3. Tilmaamaha wax soo saarka degdegga ah, bogga menu-ka, wuxuu si dhakhso leh u dejin karaa isticmaalka qalabka.
4. Qalabka baadhitaanka: qor Soo-dejinta Muuqaalka, jaridda fog, baaritaanka Ping, hagida raadinta, helitaanka habboon ee macluumaadka aaladda.